[P00000MM] Eau de toillette Davidoff Cool Water 40ml(ရေမွှေး)
Eau de toillette Davidoff Cool Water 40ml(ရေမွှေး)
Eau de toillette Davidoff Cool Water 40ml(ရေမွှေး) 27500 ( )
Shoppingstarkရေမွှေးသည် 100% original ဖြစ်ပါသည်
အဓိကပါဝင်ပစ္စည်း Denatured Alcohol, အမွှေးအကြိုင်ပစ္စည်း၊ရေသန့်၊limonene,,Rinallul,Jeraniol,Alpha - heterotopic Methyl playing.
Hydroxy seat by neral,citral, Seat at nerol,
Hydroxy heterotopic hexyl.3- saikeulloekssenka box Aldehyde akeuril rate
Octyl akeuriramaideu Copolymer,Hydrolyzed Simmondsia Chinensis Seed Esther.
기능성 화장품의 경우 화장풍법에 따른 식품의 약품 안전처 심사 필유무 None
အလှကုန်ပစ္စည်းကို အသုံးပြု၍ အောက်ပါ ဖေါ်ပြထားသည့်
လက္ခဏာကို ရရှိပါက ပစ္စည်းအသုံးပြုခြင်းကို ရပ်တန့်ပေးပါ။ ဆက်လက်၍ အသုံးပြုပါက လက္ခဏာက
ပို၍ဆိုးယုတ်နိုင်သည့်အတွက် အရေပြားရောဂါ ဆရာဝန်နှင့် ပြသရပါမည်။ 1)အသုံးပြုစဉ်တွင်
နီရဲသောအပြောက်ပေါ်ခြင်း ၊ရောင်ခြင်း ၊ယားခြင်း ၊ခြစ်ရာပေါ်ခြင်း စသည့်လက္ခဏာကိုရရှိပါက 2)လိမ်းထားသည့်
နေရာသည် နေရောင်ချည်ဖြင့်ထိ၍ အထက်ပါလက္ခဏာများ ရှိလျှင် ၂။ဒဏ်ရာ (သို့) နှင်းခူနာနှင့်
အရေပြားယောင်ယမ်းနာကျင်ခြင်းစသည်တို့ရှိသည့် နေရာတွင် အသုံးပြုခြင်းကို တားမြစ်ပါသည်။ ၃။မျက်စိထဲသို့
ဝင်သွားပါက ချက်ခြင်းဆေးပေးပါ။ ၄။ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ကိုင်သွယ်သည့်အခါ သတိထားရမည့် အချက် 1)အသုံးပြုပြီးလျှင်
ဧကန်၊မုချ အဖုံးကို ပိတ်ရပါမည်။ 2)ကလေးငယ်များ၏ လက်နှင့် မမှီသော နေရာတွင် သိမ်းထားပါ။
3)အပူများသောနေရာ (သို့) အအေးများသောနေရာ နှင့် နေရောင်ချည် ထိတွေ့သည့်နေရာတွင် မထားပါနဲ့။